Umgaqo-nkqubo wabucala, i-OffshoreCompany.com
Imfihlo yakho ibalulekile kuthi. Sibeka eyona nto iphambili ekugcineni ulwazi lwakho oluyimfihlo.
Ngokungena okanye ukusebenzisa iwebhusayithi ye-OffshoreCompany.com, uyavuma ukuba umgaqo-nkqubo wabucala we-OffshoreCompany.com uchazwe ngezantsi.
Umhla wokugqibela uhlengahlengisiwe: 20th Meyi 2018
Ulwazi oluqulethwe sithi, ukuba uyalunikezela, luya kusetyenziselwa ukunxibelelana nawe, ukukuthumelela ulwazi oluthe kratya malunga neemveliso kunye neenkonzo zethu, ukubonelela ngenkonzo kunye nokubonelela ngolwazi ngakumbi xa uceliwe.
Xa usinika ngolwazi lwakho ngezi njongo, uyavuma ukuqokelelwa kwethu kunye nokulungiswa.
Asabelani ngolwazi lwakho nomntu wesithathu
Ngokundwendwela iwebhusayithi yethu, ungenise iifom ze-Intanethi ngolwazi oluthe kratya okanye ukuthenga inkonzo, ngokunikezela ngeenkcukacha zakho nge-imeyile, uyavuma ukuqokelelwa nokusetyenzwa kolwazi lwakho oluchongiweyo, iPII, njengoko kuchaziwe apha.
UMmiselo woKhuseleko lweDatha ngokuBanzi (GDPR) umlawuli wedatha ziinkonzo ngokubanzi zeNkampani, Inc.
Ulwazi onokubonelela ngalo ngokuxhomekeke kwi-GDPR
Ulwazi oluchongiweyo onokubonelela ngalo kuku-odola inkonzo, ucele ulwazi oluthe kratya kwaye ufumane uhlaziyo olubalulekileyo lwezomthetho ngokungenisa usebenzisa ifom ye-Intanethi ku-www.offshorecompany.com.com (iwebhusayithi), ngokusithumela i-imeyile, ukufowunela umnxeba, usebenzisa iposi okanye ngenye indlela uqhagamshelane nathi.
Ulwazi oluchongiweyo osinike lona ligama lakho kunye nolwazi lokunxibelelana, iimfuno zefom yezomthetho yeenkonzo ezi-odolwe, ulwazi lokuhlawula iodolo yenkonzo, ulwazi lokuhambisa ukuhanjiswa kweodolo kunye nawo onke amabakala afunekayo ukuze ugcwalise kwaye ufake iifayile, ezinje; Ulwazi olutsha lwenkampani, ulwazi olutsha lwentembeko kunye nezinye iimfuno zomthetho ezinxulumene noko.
Ukhuseleko lweDatha yakho
Sizimisele ukuthobela i-GDPR (inqaku 5)
Idatha yobuqu iya kuba:
kusetyenzwe ngokusemthethweni, ngokufanelekileyo nangokungafihli nto ngokunxulumene nomxholo wedatha ('ukuba semthethweni, ubulungisa kunye nokwenza izinto elubala');
Ukuqokelelwa kweenjongo ezichaziweyo, ezicacileyo nezisemthethweni kwaye ingaqhubekeki ngendlela engahambelaniyo nezo njongo; Ukuqhubekeka kokuqhubekeka kweenjongo zokugcina izinto kuluntu, iinjongo zophando lwezenzululwazi okanye zembali okanye iinjongo zamanani, ngokungqinelana neNqaku 89 (1), azithathwa njengezingahambelaniyo neenjongo zokuqala ('ukunciphisa iinjongo');
ezaneleyo, ezifanelekileyo nezilinganiselweyo kwinto eyimfuneko ngokunxulumene neenjongo zokwenza kwazo ('ukunciphisa idatha');
ichanekile kwaye, apho kukho imfuneko, igcinwe isexesheni; onke amanyathelo afanelekileyo kufuneka athathwe ukuqinisekisa ukuba idatha yobuqu engachanekanga, kuthathelwa ingqalelo iinjongo ezenziwa ngayo, ziyacinywa okanye zilungiswe ngaphandle kokulibazisa ('ukuchaneka');
igcinwe ikwimo evumela ukuchongwa kwezifundo zedatha kungekho ngaphezu koko kufanelekileyo ukulungiselela iinjongo zedatha yobuqu eyenziwayo; Idatha yobuqu inokugcinwa ixesha elide ngokwedatha njengoko idatha yobuqu iya kuqhutywa ngenjongo yokugcina kuphela umdla woluntu, iinjongo zophando zesayensi okanye zembali okanye iinjongo zamanani ngokweNqaku 89 (1) ngokuxhomekeke ekuphunyezweni kobuchwephesha obufanelekileyo nombutho amanyathelo afunwayo ngulo Mmiselo ukuze kukhuselwe amalungelo kunye nenkululeko yesifundo sedatha ('umda wokugcina');
iqhutywe ngendlela eqinisekisa ukhuseleko olufanelekileyo lwedatha yobuqu, kubandakanya ukukhuselwa ekuqhubekekeni okungagunyaziswanga okanye okungekho mthethweni kunye nelahleko yengozi, ukutshatyalaliswa okanye ukonakaliswa, kusetyenziswa amanyathelo afanelekileyo obuchwephesha okanye ombutho ('ukuthembeka kunye nokugcinwa kwemfihlo').
Sisebenzisa iinkqubo zolwazi lweshishini ngoku ukugcina ulwazi lwabathengi luxhaswe ngokhuseleko lwangoku lwedijithali kunye nomphathi wenkqubo ezinikeleyo. Umbutho wethu uneGosa loKhuseleko lweDatha le "DPO" elinokufikelelwa kusetyenziswa i iphepha loqhagamshelwano kule website.
Sisebenzisa ababoneleli besithathu ukusingatha iwebhusayithi yethu kunye nokubonelela ngonxibelelwano, ukuhambisa ngenqanawe, ukwenza i-invoice / ukubalwa kwemali kunye nokulungiswa kwentlawulo.
Sisebenzisa iindlela ezisemgangathweni zeshishini, ezona ndlela zisetyenziswayo kunye nokubethela naphi na apho kunokwenzeka xa kufikwa, kuthunyelwa kwaye kugcinwa ulwazi lwakho.
Ngokubonelela ngolwazi lomntu siqu, uyavuma koku.
Iinkcukacha esiziqokelelayo xa undwendwela iwebhusayithi yethu:
idilesi yakho ye-IP, isikhangeli, inkqubo yokusebenza kunye nohlobo lwekhompyuter ngolwandiso, iiplagi kunye nolunye ulwazi ngesixhobo
ufike njani kwiwebhusayithi yethu, umhla kunye nexesha otyelele ngalo iwebhusayithi yethu kunye nomxholo owujongayo, indawo ekubhekiswa kuyo kunye neinjini yokukhangela.
Siya kuchaza ulwazi lwakho kuphela ngemvume yakho okanye ukuthobela imithetho elawulayo okanye imiyalelo yenkundla.
Ukuba ungenisa ifom yoqhakamshelwano kwiwebhusayithi yethu, iindawo ozithumelayo zithunyelwa kwinqanaba leenkonzo ze-SalesForce zeCRM kunye nenkonzo yolawulo lweeleta zeMailChimp. Ezi ziiprosesa zedatha yomntu wesithathu ezingqinelanayo.
Ukuba u-imeyile, fowunela umnxeba okanye kungenjalo uqhakamshelane nathi, sinokuphendula nge-imeyile - iiseva zethu zibonelelwa yiGoDaddy kwaye sisebenzisa isoftware ye-imeyile ye-Microsoft Outlook. I-GoDaddy kunye neMicrosoft ziiprosesa zedatha yesithathu ehambelana ne-GDPR.
Zonke iiprosesa zedatha yomntu wesithathu esizisebenzisayo ziyahambelana neGDPR
Google -Imeyile kunye noMboneleli weWebhusayithi
IMicrosoft - uMboneleli weServer ye-imeyile
ImeyileChimp -umboneleli weNtengiso nge-imeyile
GoDaddy-Umgcini weWebhu kunye noMboneleli weHardware
IGoogleDrive-Ukuhanjiswa koXwebhu / isisombululo sokuGcina
I-Facebook-UMboneleli weNkonzo yokuThengisa
Iakhawunti yoMthengisi-Inkqubo yokuhlawula
Siya kuchaza kuphela ulwazi lwakho ngokuhambelana nomthetho okanye ukufunyanwa komdibaniso / ukudibana.
Sisebenzisa njani idatha yakho
Ulwazi olunikezwe nguwe isetyenziselwa ukwanelisa iimfuno kuzo naziphi na izicelo zolwazi okanye iinkonzo, uhlaziyo kwimithetho efanelekileyo yehlabathi, unyuselo kunye neengcebiso.
Ulwazi esiqokelelayo isetyenziselwa ukufunda umsebenzi wewebhusayithi kunye nokuphucula umxholo kunye namava omsebenzisi, ukubeka esweni iindleko zentengiso kunye neenzame kunye neengcebiso ekujoliswe kuzo ngumdla.
Ulwazi lomntu wesithathu inokudityaniswa nolwazi olunikezile okanye waqokelela, ukuze lisetyenziswe ngokungqinelana nale nkqubo yabucala.
Amalungelo akho phantsi kwe-GPDR
Ilungelo loLwazi -Ilungelo lokubuza ukuba yeyiphi idatha yobuqu ekhoyo kunye nendlela esetyenziswa ngayo.
Ilungelo lokuFikelela -Ilungelo lokujonga idatha yakho yobuqu.
Ilungelo lokuLungiswa kwakhona -Ilungelo lokulungisa kunye nokuguqula ukuba alihlaziywa.
Unelungelo lokurhoxisa imvume -Ilungelo lokurhoxisa imvume yokuqokelela kunye nokulungiswa kweenkcukacha zakho
Ilungelo lokuchasa -Ilungelo lokuchasa idatha yakho yobuqu eqhutywayo.
Ilungelo lokuchasa ukuqhubekekisa okuzenzekelayo -Ilungelo lokuchasa isigqibo esenziwe ngokusingathwa okuzenzekelayo.
Ilungelo lokulibaleka -Ilungelo lokucela idatha yakho ukuba icinywe.
Ilungelo lokuphatheka kwedatha -Ilungelo lokucela ukuhanjiswa kwedatha yakho- idatha kufuneka inikezwe okanye idluliselwe kwifomathi efundeka ngomatshini.
Sigcina ixesha elingakanani idatha yakho?
Siza kugcina ulwazi lwabathengi ngalo lonke ixesha kufanelekile ukufezekisa iodolo yenkonzo kunye nokuququzelela izicelo kunye nokuthobela iimfuno zomthetho.
Qhagamshelana nathi malunga nokususa idatha yakho.
Ukuxelwa kwaBangaphantsi kweminyaka eli-16 ubudala
Imvume yomzali iyafuneka ngaphambi kokuba usinike iinkcukacha zakho.
Rhoxisa imvume yakho
Nxibelelana neofisi yethu kwaye ucacise esi sisicelo sokurhoxisa imvume yokuqokelelwa nokusetyenzwa kweenkcukacha zakho.
Isicelo sokuFikelela kwiSifundo (SAR)
Ungacela ukuba sikuthumele iinkcukacha malunga nayo nayiphi na ingcaciso yobuqu esiyiphetheyo, okanye
ungacela ukuba silungise nakuphi na ukungangqinelani, okanye
Unokucela ukuba ususe yonke idatha yakho.
Ngokuhambelana ne-GDPR, zonke izicelo zokufikelela zibonelelwa simahla ngaphakathi kweentsuku ezingama- .
Ngayo nayiphi na imibuzo enxulumene nedatha yakho, okanye yokungenisa izicelo, nceda unxibelelane nathi:
IiNkonzo eziHlanganisiweyo zeNkampani, Inc.
5919 IGreenville # 140
IDallas TX 75206-1906
Ifowuni: + 1 (800) 959-8819
Okwamanye amazwe: (661) 253-3303
Ifeksi: (661) 259-7727
Imigaqo-nkqubo yomntu wesithathu
Sinoxanduva kwimigaqo-nkqubo yethu yabucala.
Sinokunxibelelana nezinye iiwebhusayithi. Kubalulekile ukujonga umgaqo-nkqubo wabucala kunye nokuqinisekisa ukuba ezinye iiwebhusayithi ziyahambelana ne-GDPR ngaphambi kokuthumela ulwazi lomntu.
Asamkeli naluphi na uxanduva okanye uxanduva lokuphathwa ngasese kwabantu besithathu.
Iicookies zisetyenziswa ngemvume yakho, ziifayile ezincinci kwikhompyuter yakho ezikuchonga kwiwebhusayithi yethu.
Iindidi zecookies esizisebenzisayo
Uhlalutyo lweWebhusayithi: ibonelela ngamanani eendwendwe, ukufunyanwa kwezithuthi kunye nokuziphatha komxholo ukuze kuphuculwe intengiso yethu kunye namava omsebenzisi.
UkuJolisa kwiNtengiso: irekhoda amanyathelo athathwa kwiwebhusayithi yethu njengomxholo owucelileyo kwaye unxibelelanise ucofa. Sisebenzisa oku ukuphucula izinto kunye nemiyalezo kwiwebhusayithi yethu nakwizixhobo.
Ikhukhi yeqela lesithathu
Ii-cookies zomntu wesithathu ezinokuseta kwiwebhusayithi yethu zibandakanya:
UGoogle Uhlalutyo uqokelela idatha engeyiyo eyakho malunga nokusetyenziswa kwewebhusayithi ngokomgaqo-nkqubo wabucala: www.google.com/policies/privacy/
Icookie kaGoogle yokuThengisa kwakhona ibonelela ngeendlela zokucoca umxholo oziswe kuwe ngokusekwe kwimbali yakho yokukhangela kwiwebhusayithi yethu. Unokukhetha ukuphuma koku kuseto lweeNtengiso zikaGoogle.
I-SalesForce yinkqubo yethu yeCRM kwaye iicookies zisivumela ukuba silawule unxibelelwano nabathengi malunga nezicelo zolwazi kunye neeodolo zenkonzo.
I-Wordfence kukhetho lwe-WordPress yoKhuseleko olusebenzisa ikuki ukumisela ukuba ungumntu na umsebenzisi.
I-Facebook Pixel ibonelela ngohlalutyo lwewebhusayithi ukulinganisa intsebenzo yentengiso.
Unokucima iicookies ngokutshintsha useto lwebrawuza yakho.
I-OffshoreCompany.com lishishini kwaye ayisiyiyo ifemu yomthetho. Asiboneleli ngengcebiso yezomthetho okanye yezemali.
Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, inkxalabo, okanye izimvo malunga nemigaqo-nkqubo yethu yabucala okanye iinkqubo, singathanda ukwazi ukuba ziyintoni ukuze sikwazi ukuziphendula. Nceda unxibelelane nathi ku-1-800-959-8819.
Ukuhlaziywa kokugqibela ngoDisemba 9, 2019